के तपाईंलाई टन्सील भएको छ ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
– डा. ललित कुमार मिश्र
श्रावण ३२, २०७४- आधुनिक जीवनमा टन्सीलाईटीस अर्थात घाँटीको समस्याले प्राय: जसो घरका एक सदस्य खासगरी केटा-केटिहरुलाई बेलाबखतमा दुख: दिइरहेको हुन्छ ।
टन्सील शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । जसले नाक र मुखबाट पसेका किटाणुहरुलाई नष्टगर्ने काम गर्दछ अर्थात यसले द्वारपालको काम गर्दछ भन्दा अतियुक्ती न होला ।
टन्सीलाइटिस दुई प्रकारको हुन्छ ।
टन्सील पाक्नु, रिमयुटिक फिबर हुनु, किड्नी सुन्निनु आदि जस्ता कमप्लिकेशनहरु आउन सक्छ ।
एलोप्याथिमा एन्टिबायोटिक दिईन्छ यसबाट भएन भने अपरेशन गर्ने सल्लाह सम्बन्धित चिकित्सकबाट दिइन्छ । होमियोप्याथिक औषधिको प्रयोगले टन्सीलाइटिस जरैबाट पूर्णरुपले निर्मुल हुनसक्छ । सर्जरीको आवश्यकता पर्दैन । अत: त्यस्ता रोगी जो अपरेशन नगराई औषधिबाट नै ठिक हुन चाहन्छन् वा सानै उमेरका बाल-बालिकाहरु, मधुमेहका रोगी अथवा हृदयरोगबाट पीडित रोगी जसलाई टन्सीलको समस्या छ भने एकपटक होमियोप्याथिक उपचार गराएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
डिहाईड्रेशन हुन नदिनको लागी प्रसस्तमात्रामा मन तातो पानी खाने । घामलाग्ने तथा शुद्ध हवा आउने कोठामा बस्नु पर्छ । ज्वरो को अवस्थामा आराम गर्ने । धुमपान न गर्ने । पिरो, अमिलो, गुलियो, बढि तेल र मसाला हालेको सब्जी , अमिलो, चिसो, दहि, महि को सेबन गर्नु हुदैन । गरम पर्दाथको सेवन गरेपछि लगते चिसो पेयपदार्थको सेवन कदापि गर्नु हुदैन ।
टन्सीलाइटिसको उपचारमा रोगीको शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा पारिवारिक ईतिहाससमेतलाई मध्ये नजर राखेर लक्षणको आधारमा प्रयोग हुने केही होमियोप्याथिक औषधिहरु निम्न लिखित छन् । बेलाडोना, एपिस मेल, केलि म्युर, मर्कबिन आयोड, फाईटोलेक्का, फेरम फाँस, केलिम्युर, नेट्रम म्युर, मर्कसल, लाईको पोडियम, ईग्नेशिया, कालिबाइ क्रोम, लेकेसिस, हिपर सल्फर, टियुबर कुलिनम, वेसिलिनम आदि ।
जसको प्रयोग फोलिक्युलर टन्सीलाइटिस लाभदायक मानिन्छ । यसैगरी हाईपर ट्रोफाईड टन्सीलाईटिसको लागि भने– बेराईटा कार्ब, बेराईटा-आयोड, बेराईटा म्युर, आयोडिन, फाइटो लेक्का, कल्केरिया कार्ब, कोलचिकम ईत्यादि । ऊपरोक्त ऊल्लेख गरीएका औषधिहरु आफ्नो नजिकको कुनै योग्य तथा अनुभवि होमियोप्याथिक चिकित्सकसंग सल्लाह लिई प्रयोग गरेमा उचित हुन्छ ।